Home Wararka Maanta Wax ka ogow kuraasta sida xowliga ah loo boobayo iyo cida ka...
Wax ka ogow kuraasta sida xowliga ah loo boobayo iyo cida ka dambeysa
Hannaan xowli ah, oo ay wehliso boob, ayey ku socotaa doorashada gobollada waqooyi, iyagoo iska dhaga tiraya dhaliilaha hareeyey kuraasta ay ilaa iyo iminka doorashadooda qabteen.
Guddiga doorashooyinka reer waqooyiga, ayaa shalay soo saaray jadwalka 5 kursi, kuwaa oo doorashadooda la qabanayo toddobaadka gudihiisa.
Kuraasta la qabanayo doorashadooda ayey sumadoodu kala tahay, HOP-241, HOP-263, HOP-240, HOP-271 iyo HOP-205, iyadoo la sii ogyahay natiijada doorashada kuraastaas, taas oo ah arrinta keeneysa walaaca ugu badan.
Mahdi Guulleed iyo Cabdi Xaashi, ayaa u muuqda waqtigan in ay ku heshiiyeen, boobka kuraasta gobollada waqooyi, maaddaama ay iyagu yihiin, kuwa hagaya ee kor kala socda, isla markaana ergada usoo daabula hoolka doorashada lagu qabto ee dugsiga sare ee booliska Jeneral Kaahiye.
Waxaa heer ku dhaw kan gobollada waqooyi, iyadana ku socota doorashada Koonfur Galbeed, waana tan bannaanka keentay ujeedka hoggaanka fashilmay ee maamulkaas, ninka lagu magacaabo Lafta-gareen, kaas oo si aan ganbasho lahayn kuraasta ugu dhacaya Farmaajo.
Si kastaba, doorashada dadban ee dalka ka socota, ayaa lagu tilmaamayaa, midii ugu musuqa badnayd ee Soomaaliya soo marta, waana tallaabo dhaawici karta dimuqoraadiyada iyo guud ahaan mustaqbalka dalka, iyadoo beesha caalamka iyo bulshada rayidkana ay niyad jab ka muujiyeen, sida doorashada loo maamulayo.